The Ab Presents Nepal » ०६२/०६३ को आन्दोलन झल्को दिने माइतीघरको जनसागर १० फोटोमा हेर्नुहोस! सरकार छलफलमा
०६२/०६३ को आन्दोलन झल्को दिने माइतीघरको जनसागर १० फोटोमा हेर्नुहोस! सरकार छलफलमा
काठमाडौँ, असार ४ । सरकारले गुठि विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरिसकेपछि पनि आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमहरु रोकिएका छैनन् । वुधबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा गुठि विधेयकलाई खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै जनसागर नै उपस्थित भएको थियो ।
वुधबारको प्रदर्शनमा उपत्यकाका ४० भन्दा बढी गुठियार र त्यससंग सम्वन्धित मानिसहरुको सहभागिता थियो । उपत्यकाबासिहरु जबसम्म सरकारले गुठी विधेयक खारेज गर्दैन तबसम्म आन्दोलन गरिरहने भन्दै नारावाजी गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणबाट आएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा सरोकारवाला र पार्टीभित्र छलफल चलाउने गरि विधेयक फिर्ता लिएकी थिइन् तर गुठियारहरुले विधेयकलाई पुन दर्ता गर्न नमिल्ने गरि खारेज गर्न माग गरेका छन् । राजधानीको माइतीघरमा देखिएको वुधबारको भिडले विस २०६२÷०६३ को आन्दोलनको झझल्को दिएको छ ।